Minisiteran’ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Mitohy ny ady amin’ny kolikoly
Madagasikara Tanora 4 tapitrisa no tsy an’asa
Miisa 500 ireo tanora nahazo asa teo no ho eo nandritra ny andiany voalohany tamin'ny hetsika seraben'ny asa natao teto Antananarivo tamin'ny volana jona teo.
Mpivarotra eny Besarety “Tsy mbola nahazo alalana hivarotra”, hoy ny sefo fokontany
Tsy nisy filazana tamin’ireo mpivarotra fa afaka mivarotra eo amin’ny lalana Besarety izy ireo.
Seraben’ny asa Hotanterahina any Toamasina ny andiany faharoa
Mahatratra 4 tapitrisa ireo olona tsy an’asa eto amintsika. Ny 70 %-n’ireo dia tanora avokoa,
Association DAHOLO Nampianatra ny ankizy momba ny fahadiovana teny 67 ha
Nanentana ny ankizy dimy ka hatramin’ny 10 taona momba ny fahadiovana sy fidiovana teny Antsalovana 67 ha omaly ny fikambanana Daholo, tarihin-dRtoa Mihanta Ramanantsoa.
Famokarana zava-pisotro Miara-miasa akaiky amin’ny tantsaha ny Star
Miara-miasa akaiky amin’ireo tantsaha eto amintsika ny orinasa Star amin’ny famokarana ireo akora ilaina amin’ny fanodinana zava-pisotro.
Aretina azo avy amin’ny Firaisana tsy voaaro Mety mahafaty ary mitarika fahamombana
Mitarika any amin’ny fahafatesana sy fahamombana mihitsy raha tsy voatsabo ara-dalàna ny aretina azo avy amin’ny firasaina ara-nofo maro loatra na ny IST
Tsy fanjarian-tsakafo Mahatratra 49 % ireo ankizy lasibatra eto an-drenivohitra
Mahatratra 49 % ireo ankizy latsaky ny 5 taona eto Antananarivo Renivohitra no lasibatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Miezaka mitady vahaolana mifandraika amin’izany ny kaominina sy ny Ong ACF na “Action Contre la Faim” izay nikaon-doha tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely, omaly.
Mbola manankery ankehitriny ny teny filamatra noraisin-dry zareo mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny asa, ny fampananan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy tarihan-dRtoa Gisèle Ranampy manao hoe “Tsy misy indrafo ho an’ny mpanao kolikoly”
ka mbola manankery ihany koa, dia mbola mijanona ho maimaimpoana avokoa ny asa atao eo anivon’ity minisitera ity mandra-pisian’ny fandaminana vaovao mahakasika izany indrindra ny mikasika ny fanomezan-dalana hiasan’ireo mpiasa vahiny na miasa eto an-drenivohitra na any amin’ny Faritra sy ny fanomezana fitoviana lenta ara-pitondran-draharaha ny mari-pahaizana sy ny manodidina. Natao izao hanamafisana ny voalazan’ny velirao fahatelon’ny filohan’ny Repoblika Malagasy momba ny fametrahana ny asam-panjakana lavitry ny kolikoly sy ho fampiharana ny politika ankapobeny’ny fitondram-panjakana izay manana ny tanjona ny zavatra ataony hipaka mivantana any amin’ny fiainan’ny vahoaka.